अबको मुख्यसचिव को ? तीन सचिव जगेडामा ! – Sankalpa Khabar
अबको मुख्यसचिव को ? तीन सचिव जगेडामा !
संकल्पखबर ३१ भाद्र २०७७, बुधबार १३:२७
काठमाडौं । तीन सचिव पद रिक्त हुँदा हुँदै सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका वीरबहादुर राईले सचिवमा काम गर्न नपाई अवकाश लिएका छन् जब कि उनले अवकाश लिदा देशभर ३ सचिव पद रिक्त थिए । ३ सचिव पद रिक्त हुँदा हुँदै पनि राईले सचिवमा काम गर्ने मौका पाएनन, उनी अवकाशमा गए । ओली सरकारले लामो समयदेखि ३ सचिवलाई जगेडामा राखेको छ । जगेडामै रहेको बेला राइले अवकाश पाए भने अरु दुई सचिव अहिले पनि जगेडामै छन ।
जानकारहरुका अनुसार सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भए पछि अवकाश नपाउँदासम्म उनी जगेडामै बसेका थिए । राई बाहेक अरु दुई सचिव मधु मरासिनी र केदार न्यौपाने पनि अहिले जगेडामै छन् । केही दिन अघि मात्र सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका चन्द्रमान श्रेष्ठ पनि जगेडामा रहनेछन् । सरकारले आफूलाई मन नपरेका सचिवलाई जगेडामा राख्ने गरेको छ । यसअघि शाही कालमा झण्डै आधा दर्जन सचिवलाई जगेडामा राखिएको थियो ।
ओली सरकारले २०७५ कात्तिकमा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याई अतिरिक्त समूह (जगेडा) मा राख्ने निर्णय गरेको थियो तर सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन । सो निर्णयको विरुद्ध चौधरीले भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन ।
पूर्वप्रशासकहरुका अनुसार ३ सचिवलाई लामो समयसम्म जगेडामा राखिएको गणतन्त्रपछि यो पहिलो पटक हो ।
सर्वोच्चले सेवा समुह नमिलेको कारण देखाउँदै चौधरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी ग-यो । सर्वोच्चको आदेश पछि चौधरीलाई जगेडामा राख्ने निर्णय लागु हुन सकेन । चौधरीले एक दिन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गरिनन् ।
२०७२ असोजमा सरकारले एकै पटक १३ सचिवलाई अतिरिक्त समुहमा राख्ने निर्णय गरेको थियो तर त्यतीखेर सचिवलाई अतिरिक्त समुहमा राख्नुको प्रयोजन फरक थियो । निजामती सेवा नियमावलीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन १३ सचिवलाई केही समयकोलागि अतिरिक्त समुहमा राखिएको थियो ।
नियमावली अनुसार केही दिन पछि विशेषज्ञताको आधारमा उनीहरुलाई विभिन्न कार्यालयमा खटाइएको थियो । पूर्व प्रशासकहरुका अनुसार ३ सचिवलाई लामो समयसम्म जगेडामा राखिएको गणतन्त्रपछि यो पहिलो पटक हो ।
अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा शिक्षा मन्त्रालयमा एक एक जना सचिव पद रिक्त छ । तर तीन वटा सचिव जगेडामै छन् । जगेडामा राखिएका सचिवको कुनै भुमिका हुन्न । उनीहरूको काम भनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जाने र हाजिरी गर्ने मात्र हो । जगेडामा राखिएका ३ सचिव मध्ये न्यौपाने सचिवमा कार्यरत हुँदा जगेडामा रहेका छन् भने बाँकि दुई सचिव सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भए पछि जगेडामा बसेका हुन् ।
निजामती सेवा ऐन अनुसार सचिवमा बढुवा भएको ५ वर्ष पछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने हुन्छ । संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वे रिपोर्टमा देशभर ७२ सचिवको दरबन्दी कायम गरिएको छ तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कति संख्या सचिव राख्ने भन्ने मापदण्ड राखिएको छैन । ओएनएम सर्वेमा नेपाल सरकारका सचिव प्रदेशमा गएपछि मुख्सचिव हुने व्यवस्था छ ।
यसैवीच, आगामि कात्तिक ६ बाट मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले अवकाश लिने भएका छन् । उनको ठाउँमा जान केही सचिवहरुको अहिलेबाटै दौडधुप शुरु भएको छ । तर मूख्य सचिव को हो भन्ने अझै टुगो छैन । मूख्य सचिवको टुंगो नलाग्दासम्म नीजामति प्रशासन भने अन्यौलमै रहेको छ ।
Previous Previous post: कैलालीमा श्राद्धको खाना खाएर एकको मृत्यु, १५ बिरामी
Next Next post: हिमाल आरोहण गर्न बहराइनका राजपरिवार सदस्यहरु नेपालमा
संकल्पखबर	१० आश्विन २०७७, शनिबार १४:५८
ललितपुर । ललितपुरका ३ जना मेयरमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन, गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन...
कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप ७ जनाको...
संकल्पखबर	१४ आश्विन २०७७, बुधबार १७:१६
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १५५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा...
संकल्पखबर	१५ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:४०
चितवन । भरतपुर विमानस्थलमा दैनिक पाँच आन्तरिक उडान हुन थालेको छ । यात्रुको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि उडान हुने जहाजको सङ्ख्या...
संकल्पखबर	९ आश्विन २०७७, शुक्रबार १०:४२
काठमाडौँ - काठमाडौँ उपत्यकाका नदी नालामा उत्खनन् गरी नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्न नपाइने व्यवस्था भएपनि तीव्ररुपमा बालुवा व्यापार फस्टाएको छ...